०७८ सालमा तीनवटा दशैँ , असोज २९ गते विजयादशमी - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार ०७८ सालमा तीनवटा दशैँ , असोज २९ गते विजयादशमी
०७८ सालमा तीनवटा दशैँ , असोज २९ गते विजयादशमी
विसं २०७८ मा तीन दशैँ परेका छन् । यो वर्ष चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने दुई वटा चैते दशैँ परेको छ । वैशाख ७ गते मङ्गलबार चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैँ परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृत गरेको पात्रो (पञ्चाङ्ग) मा उल्लेख छ । यसैगरी विसं २०७८ को चैत २६ गते शनिबार पनि अर्को चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैँ परेको छ । बडादशैँका रूपमा मनाइने आश्विन शुक्ल पक्षको दशैँ आगामी वर्ष असोज २१ गते बिहीबार घटस्थापना गरेर शुरु हुने भएको छ ।
असोज २७ गते बुधबार महाअष्टमी, असोज २८ गते बिहीबार महानवमी र असोज २९ गते शुक्रबार विजयादशमी पर्व परेको छ । कार्तिककृष्ण पक्षमा शुरु भएर शुक्ल पक्षमा सकिने तिहार कात्तिक १६ गते मङ्गलबारदेखि शुरु हुनेछ । दशैँ र तिहारलाई नेपालमा विशेषरूपमा मनाइन्छ । लक्ष्मीपूजा कात्तिक १८ गते बिहीबार र भाइटीका कात्तिक २० गते शनिबार परेको छ।
Previous articleचन्द्रागिरी हिल्सको सेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट, हेर्नुहोस कति पुग्यो प्रतिकित्ता ?
Next articleमंगलबार सुनको मूल्यमा भारी गिरावट
कांग्रेस महाधिवेशन : यी हुन् उम्मेदवारी फिर्ता लिनेहरु [सूचीसहित]
“भ्यालेन्टाइन डे” अर्थात प्रणय दिवस मनाउन कसरि सुरु भयो?